Daryeelka danbe -
Markay la wareegiddu dhammaato ka dib waxaa dhici karta in ilmuhu ama qofka dhallinyarada ah u baahdo taageero iyo caawimo ku meeleynta. taas ayaana lagu magacaabaa daryeelka danbe. Sida sharciga waafaqsan daryeelka arrimaha bulshada ayay waajib ku tahay iney ilmihii ama dhalinyarada u qaban qaabiyaan baxnaaninta danbe, haddii ilmuhu ahaa mid lala wareegey ama ku meeleyn kumeelgaar ama horinta daryeelka furan soo hayeen ugu yaraan lix billood.
Daryeelka danbe ujeedada laga leeyahay daryeelka dambe waa in ilmaha ama qofka dhallinyarada ah loo fududeeyo sidii uu gurigiisa ugu soo noqon lahaa ama u madaxbannaanaan lahaa oo isu deberi lahaa. Daryeelka danbe xitaa waa la siin karaa qofka qaangaarka ah ee dhalinyarada ilaa intuu ka gaarayo 25 jir. Qofka dhalinyarada waxaa lala galaa heshiis qorsheysan nooca adeegyada iyo kaalmada daryeelka danbe iyo waxa loola jeedo. Daryeelka danbe wuxuu ahaan karaa tusaale in, laga kaalmeeyo hoyga masruuf, shaqo ama waxbarasho.